» XOG: Musharaxiintii uu ka Guuleystay Farmaajo oo Farqaha ku dhagan Xildhibaano Laaluush ka qaatay…Badweyntimes.com
XOG: Musharaxiintii uu ka Guuleystay Farmaajo oo Farqaha ku dhagan Xildhibaano Laaluush ka qaatay…
Qaar kamid ah Musharaxiintii looga guuleestay Xilkii Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilaabay in ay farqaha ku dhagaan qaar kamid ah Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Musharaxiinta oo u badan kuwa aan codad ka helin Xildhibaanada labada aqal ayaa ku dhagan Xildhibaano katirsana labada Aqal kuwaa oo la sheegay in ay ka qaateen lacago aan badneen una balan qaadeen in codkooda siinayaan.
Xildhibaanada labada Aqal ee lacagaha ka qaatay Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood ayaa codkooda siiyay musharaxiin kale ay ka qaateen lacago badan iyo kuwa ay siyaasad ahaan aad u taageersanaayeen.
Inta badan Xildhibaanada waxaa ku dhagan xubnihii ololaha u waday Musharaxiinta iyo dalaaliin kuwaa lacagaha uga qaaday musharaxiinta Xildhibaanada qaarkood, waxaana Xildhibaanada ku eedeesan yihiin in codkooda aysan siin musharaxiinta.
”Musharaxiinta waxa ay ku dhagan yihiin Xildhibaano u badan kuwa ehel iyo saaxiib la ah kuwaa oo u balan qaaday in codkooda siinayaan musharaxiinta kana qaatay lacago, waxsaana dhacday in Xildhibaanada aysan xitaa hal cod siin musharaxiinta qaarkood” Ayuu yiri mid kamid ah ragii u ololeemayay Musharaxiinta Madaxweyne.
Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood ayaa bixiyay lacago ay ku kasbanayeen codka musharaxiinta hasa ahaatee Musharaxiinta qaarkood ayaa goobta ka tagay iyaga oon hal cod xitaa helin halka kuwa kalana ay heleen codad aad u yar.
« Warbixinta Ka HoreysayWifdi uu Hogaaminayo Michael Keating oo Gaaray Kismaayo…
Warbixinta Xigto »M/weynaha Maamulka S/land oo Fariin Digniin ah maanta usoo diray M/weyne FARMAAJO…